Tonga any Moskoa ny ekipa base - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Tonga ao Mosko ny ekipa Base
Tonga ao Mosko ny ekipa Base
12 / 02 / 2020 11 / 02 / 2020 ny Antonio Gancedo
Tonga tany Mosko ny ekipa iraisam-pirenena tamin'ny 9 Febroary, ny ampitson'io dia nihaona tamin'ny solontenan'ny Gorbachev Foundation
Ny ekipam-pirenena Iraisam-pirenena amin'ny Martsa faha-2, dia tonga tany Mosko ny 9 febroary, ny ampitso, nanao fivoriana niaraka tamin'ireo mpikambana tao amin'ny Gorbachev Foundation.
Tamin'ity fihaonana ity, natao tamin'ny 10 febroary, teo anelanelan'ireo mpikambana ao amin'ny World World 2 ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatsiarovana ary ny Gorbachev Foundation, niova ny hevitra eran'izao tontolo izao fa mila manangana tetezana mba hisorohana ny fialan-tsasatra eo amin'ny olona.
Ny hevitry ny World March for Peace and Nonviolence dia nohazavaina, ny hanitarana sy hanome lanja ny fandriampahalemana, ny fanajana, ny fandeferana, ny firaisankina, ny toe-tsaina amin'ny fananganana tetezana amin'ny ambaratonga rehetra, ny tena manokana, ny fiaraha-monina, eo amin'ny vahoaka.
Ny sasany tamin'ireo hetsika natao tamin'ny martsa dia nofaritana, eran'izao tontolo izao amin'ny làlany ary koa amin'ireo toerana tsy nandalovany.
Nampiovaina ihany koa tamin'ny fampielezankevitra ICAN, nentina ho sainin'ny martsa faha-2 tamin'ny toerana rehetra nandefasana sy / na lany izany, ary mampahafantatra momba ny tokony hanolorana hetsika mialoha mampiroborobo ny fanasoniavana ny TPAN (Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary).
Ny tanjona dia natao ihany koa hampahafantarina ny famerenana ny volana martsa isaky ny 5 taona ary, mazava ho azy, fa tsy ho kivy amin'ny fotoana rehetra hiasa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy herisetra eto ambonin'ny tany.
Nanomboka tamin'ny volana martsa faha-2 ny solontenan'i Gorbachev Foundation ny boky ny 1 martsa manerantany.
Taorian'ny fihaonana dia nisokatra ny mety ho fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy ...
"Afaka isika" fampisehoana any Rognac
Forum Forum Coruña hisian'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana